Fivarotana kapa: manova ny fahamendrehana tsy misy sazy
Home » Lahatsoratra farany farany » Resorts » Fivarotana kapa: manova ny fahamendrehana tsy misy sazy
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Safety • Vaovao Mafana Saint Lucia • fiantsenana • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Manome fihenam-bidy faratampony amin'ny sandoka tsy misy sazy ny Sandals Resorts
Kiraro misy trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 dia mamela ny fanovana anarana feno tsy misy sazy ho an'ny daty voalohany sy toeram-pitsangatsanganana noho ny fanamby amin'ny fitsangatsanganana miakatra avy amin'ny coronavirus COVID-19. Midika izany fa ny vahiny dia afaka manova ny anarana rehetra amin'ny famandrihana amin'ny anarana vaovao tsy misy sazy. Azafady mba jereo ny politikan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny fanovana / fanafoanana ny sidina satria mety miovaova izany.
Ny famandrihana izay mandeha ao anatin'ny fe-potoana voalaza etsy ambony dia havela hamerina handahatra ny dia hatramin'ny 12 volana miala ny daty nitetezany tany am-piandohana. Ny kiraro dia miaro ny taha tany am-boalohany amin'ny sokajy mitovy sy amin'ny toeram-pivarotana iray ihany. Tena mihatra ny datin'ny delestazy amin'ny krismasy sy taom-baovao.
Ny famandrihana prizewinner voamarina izay mandeha ao anatin'ny fe-potoana voalaza etsy ambony dia afaka mamerina mitsangatsangana mandritra ny 6 volana manomboka amin'ny daty fitsangatsanganana tany am-boalohany, mifototra amin'ny fisian'izany.
Ny mari-pankasitrahana Prizewinners izay mbola tsy navotana ary efa tapitra ny 30 aprily 2020, dia azo itarina amin'ny dia mandritra ny 6 volana fanampiny manomboka amin'ny vanim-potoana farany.
TENY FAHADIOVANA VOALOHANY NY SANDALA
Sandals dia manara-maso ny fanavaozana ny vaovao farany avy amin'ny OMS, CDC, governemanta isam-paritra ary manam-pahefana ara-pahasalamana eo an-toerana mba hahazoana antoka fa manana ny vaovao farany izy ary manaraka ny torolàlana rehetra.
Ny fanatsarana sy ny fanabeazana ho an'ny mpiasa dia mitohy mba hahazoana antoka fa fahombiazana amin'ny fampiharana ny fomba fiasa amin'ny toeram-pialan-tsasatra ary koa ao amin'ny tranon'ireo mpikambana sy ny fiarahamonina misy azy.
Mampifandray am-pahibemaso an'ireo vahiny eo an-toerana ireo toeram-pialan-tsasatra ireo fomba fidiovana natolotray mba hidiran'izy ireo amin'ity ezaka lehibe ity.
Sandals dia manombatombana ireo kaonty fanadiovany rehetra ary mampitombo ny faharetan'ny fepetra fanadiovana ho an'ireo faritra be mpandeha rehetra ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra ao anatin'izany ny trano fisakafoanana, fisotroana, toerana fialamboly ary efitrano fandraisam-bahiny misy rafitra fanamarinana telo mba hiantohana ireo fenitra henjana ireo.
Ireo resort dia manome savony sy gel fanampiny fanadiovana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, trano fandroana ary toerana hafa manodidina ireo trano.
Ny tobin'ny mpitsabo mpanampy voalohany eo an-toerana sy ny mpiasan'ny fitsaboana 24/7 dia vonona hanohana ny vahiny rehetra.
Ny vondrona fialan-tsasatra dia manontany amin'ny ekipa mpitsabo malaza eran'izao tontolo izao mba hahazoana antoka fa manana ny fizotrany sy ny fomba fanaony farany napetraka eo amin'ny toeram-pialan-tsasatra.
Ny trano fandraisam-bahiny sy ny torapasika dia mijanona ho isan'ny toerana lafo vidy indrindra azo antoka sy mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao hitsidihana izao.